Sat, Jul 4, 2020 at 4:40am
मंगलवार, २८ श्रावन २०७६,	आहाखबर	1.44K
मध्य मनसुनको धमिलो पानी अनि गड्गडाउँदो भोटेकोसीमा ¥याफ्टिङ । ¥याफ्ट बोटसँगै यात्रु नदीको छालसँग सङ्घर्ष गर्दै अनि मजा लिँदै बग्न थाले । ती ¥याफ्टिङ बोटहरूभन्दा अघिअघि एक्लै एकप्रकारको सानो डुङ्गा कायकमा एकजना महिला तैरिरहनुभएको थियो । महिला शोभा मगरमा सबैको आँखा परिरहेको थियो । ¥याफ्टिङमा जानेहरू अचम्ममा परे । त्यस्तो गड्गडाउँदो भोटेकासीमा एक्ली किशोरी ?
सिकेर अहिले भने उहाँलाई कम्पनीले सेफ्टी कायकिङको अनुमति दिएको छ । आफूले कायकिङ गरेको देखेर धेरैले स्याबासी दिने गरेको उहाँ बताउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “कतिले यत्रो सानो मान्छेले रेस्क्यु गर्न सक्छ र ? भन्दै आश्चर्य व्यक्त गर्छन्, कतिले भने यस्तो साहसिक काम गर्दै जाऊ भन्दै हौसला दिन्छन् ।” अब यसैमा थप सीप र ज्ञान विकास गर्दै करिअर बनाउने लक्ष्य शोभाको छ । उहाँ मात्रै होइन, अरू महिला पनि नदीमा अरूको जीवन रक्षा गर्दै रोजगारी चलाइरहेका समाचार गोरखापत्रमा छ ।
¥याफ्टिङका लागि प्राविधिक हिसाबले निकै जटिल र कठिन भनी विश्वमै कहलिएको छ, नेपालको भोटेकोसी–सुनकोसी नदी । यस्तो कठिन नदीमा उद्धारको जिम्मेवारी सम्हाल्नु कम साहसिक कर्म होइन । अझ भर्खरैका किशोरी महिला देख्दा जोकसैले पत्याइहाल्दैनन् । भोटेकोसीमै रेस्क्यु कायकरको काममा आउनुभएकी आकृति खपाङ्गीको अनुभव पनि त्यस्तै छ । “आउटडोर एडभेन्चरमा स्वाभाविक रूपमा केही बढी जोखिम हुन्छ । हरबखत चनाखो हुनुपर्छ । त्यसैले यसमा महिला आउन रुचाउँदैनन्”, जोखिमपूर्ण नदीहरूमा कायकिङ गरिसक्नुभएकी २२ वर्षीया आकृति भन्नुहुन्छ, “मलाईचाहिँ मेरा दाइहरूले प्रोत्साहन गरेकाले यो पेसामा आएकी हुँ ।”
नेपाल एसोसिएसन अफ ¥याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा)का अनुसार एक हजार छ सय जना प्रमाणीकृत रिभर गाइडमध्ये महिला जम्मा १० जना छन् । नाराका महासचिव शिव अधिकारीले भन्नुभयो, “तीमध्ये पनि कति विदेश गइसके, कतिले काम छोडे होलान् ।” नाराले यस वर्ष भिजिट नेपाल २०२० लाई लक्ष्य गरी २० जना नयाँ महिलालाई रिभर गाइडको तालिम दिन लागेको उहाँले बताउनुभयो ।